Reveillon anaty haizina aty Fianarantsoa
Publiée le 31 décembre 2016 par tsorokav
Haizina no entinay andraisanany taona vaovao aty Fianarantsoa. Samy tapaka ny jiro sy rano. Efa hatramin'ny 5 ora maraina mbola tsy niverina hatramin'izao
Fanafihana nisesy teto Fianarantsoa
Publiée le 14 décembre 2016 par hasina
Ankatoky ny fety marina isika izao ka dia nirongatra ny asan-jiolahy taty. Fanafihana dokotera no nitranga, rehefa avy nomeny poizina ny amboa ka maty dia niditra ireto jiolahy nitaona ny entana, rehefa tapitra notaominy ny entana, dia nofohaziny ire... Lire la suite
Fijaliana tanteraka ny afitsoky ny Jirama aty Fianarantsoa, zara raha hisy adiny 2 isan'andro ny Jiro no mandeha. Ny rano kosa dia mandeha manomboka @ny 22h30 alina ka hatramin'ny 4h30 maraina, eo dia tapaka indray. Alina foana ny fakana rano aty, ko... Lire la suite
Fanafihan-dahalo tao amin'ny Distrika ny Vohibato
Publiée le 17 novembre 2016 par reepicheep
Fitaovam-piadiana arifomba toy ny kalachnikov no entin'ireto dahalo nanafika ny tanànan'Andreana, distrika ny Vohibato, Fianarantsoa. Nahatosika ny an'ireto dahalo ihany fokonolona ka maty izy ireo, ary nodorany.
Nandalo ny tamin'iny faritra iny ... Lire la suite